Qarax Khasaare geystay oo lala beegsaday ciidamo ku sugan xafada kpp – STAR FM SOMALIA
Wararka inaga soo gaaraya Xaafada KPP ee Degmada Hodan ayaa sheegaya in goor dhaweyd halkaasi uu ka dhacay Qarax Khasaare geystay.
Qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa wararka waxa ay sheegayaan inuu ka dhacay goob ciidamada ammaanka ay ku baaraan gaadiidka.
Ilaa Afar Askari oo ka tirsan ciidamada Dowladda ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay, kuwaasi oo ku sugnaa goobta Qaraxa Miinada ay ka dhacday.
Saraakiil ka tirsan maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay Askarta dhaawacantay in loo qaaday goobaha caafimaadka ee Magaalada Muqdisho.
Qaraxa markii uu dhacay ciidamada rasaas ay fureen ayaa la sheegay inuu ka dhashay Khasaare Dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah.
Ciidamo kale oo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, waxaana ay ka wadaan baaritaano.